Akụkọ - Ngwa nke PSA Nitrogen Generator na Brewery
Ngwa nke PSA Nitrogen Generator na Brewery
Ọnụọgụ oxygen gbazere (DO) na biya na-emetụta ogo biya. Oxygen ga-eme ka mmebi ahụ dịkwuo ngwa ma belata oge nchekwa. Nbibi kpatara bụ nke a:
1. Mee ka ụcha biya na agba aja aja na-acha ọbara ọbara;
2. Diacetyl rebound iji mepụta uto astringent na ịka nká;
3. Haziri turbidity na-adịgide adịgide;
4. Mebie ihe na-esi ísì ụtọ, ísì ụtọ nke hops ga-apụ n'anya ngwa ngwa.
Ọtụtụ ebe a na-eme mmanya nwere DO dị elu ma na-adabere na antioxidants, mana antioxidants na-egbu oge na-eme ihe na-eme oxidation ma nwee mmetụta na-adịghị mma. Ụzọ kacha mma kwesịrị ịbụ iji N2 dị ka ikuku oxygen na-ekewapụ gas, na PSA nitrogen generator bụ ezigbo nhọrọ. Uru nke akụrụngwa gụnyere itinye ego dị ala na nkwụsi ike dị mma, yana ọ na-ewe ikuku dị ka akụrụngwa, dị mgbe ịchọrọ.
Ngwa nke N2 na mmepụta biya bụ nke a:
Pre-nrụgide maka ịgba mmiri tank
Mmeputakwa yist chọrọ oxygen, ma ọ bụrụ na ikuku oxygen na-abanye n'oge ikpeazụ nke gbaa ụka, ọ gaghị adị mma na mbelata diacetyl ma mee ka biya nwee "ntụgharị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ". Ọzọkwa, ọ bụrụ na wort ahụ bụ oxidized nke ukwuu, ọ ga-edugakwa na mmụba nke ọdịnaya diacetyl. Ya mere, enwere ike iji nitrogen dị ka gas nchebe iji wepụ kọntaktị na oxygen.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ike iji nitrogen sachaa mmiri biya dị nro iji wepụ isi adịghị mma dị ka acetaldehyde na sulfide na-agbanwe agbanwe iji meziwanye uto, mee ka ntozuoku dịkwuo elu ma belata usoro ịgba ụka biya. N'ikpeazụ, a na-eji nitrogen eme ka tankị gbaa ụka na-ebuga biya.
Pre-nrụgide maka Bright Beer Tank
Enwere ikuku na ọkpọkọ na tank biya na-egbuke egbuke. Mgbe biya batara, ikuku ga-abanye n'ime biya iji mee ka ikuku oxygen dịkwuo elu. Iji gbochie nke a, enwere ike jupụta nitrogen n'ime sistemu mmiri mmanya na-egbuke egbuke iji mee ka ikuku dị, nke mere na ikuku oxygen na ọdịnaya diacetyl nke biya agaghị abawanye nke ukwuu.
Nkwakọ ngwaahịa & Vacuumize nke abụọ
Mmụba nke ọdịnaya oxygen na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ịdị mma na mmepụta biya. Ịhọrọ ikuku ma ọ bụ gas inert dị ka gas na-ebute ụzọ na-aghọ isi ihe. Ọ bụrụ na a na-eji ikuku na-adịghị mma dị ka gas na-ebubata ya, ọdịnaya oxygen ga-abawanye nke ukwuu iji jụ àgwà biya, n'agbanyeghị ihe nhazi nke igwe na-ejuputa.
Mana iji gas inert (N2) dị ka gas na-ebute ụzọ dị iche iche. Ndochi nke nitrogen na karama ahụ adịghị njọ na mmanya na-egbu egbu, ọ ga-eme ka ọfụfụ ma mee ka oge na-ejide oge mgbe a wụsara biya.
Site n'ụzọ, ihe 5 ndị ​​a chọrọ nlebara anya:
1. Nitrogen dị ọcha kwesịrị ịdị elu, nke kwesịrị ịbụ 99.95% usoro iwu.
2. Jiri ụfụfụ chụpụ ikuku ọkpọ ọkpọ.
3. Kpochapụ ma ọ bụ jupụta nitrogen ozugbo iji chụpụ ikuku mbụ dị na karama ahụ.
4. Iji nitrogen na-agbapụ ikuku nke ala karama ahụ.
5. N'oge ịsacha karama, ebe a na-ehicha mmiri dị ogologo iji wepụ mmiri mmiri fọdụrụnụ na karama efu.
Ọgbọ ike hydrogen, Hydrogen na Oxygen Generator, Psa Nitrogen osisi, Atlas Copco Ngp, Psa Nitrogen, Holtec Nitrogen Generator,